Shiinaha oo soo afjaraya ciqaabta la mariyo dadka jirkooda ka ganacsada - BBC News Somali
Shiinaha oo soo afjaraya ciqaabta la mariyo dadka jirkooda ka ganacsada
Image caption Dadkii la xiray ayaa sheegay in lagu qasbay inay sameeyaan alaabaha guryaha
Shiinaha ayaa lagu wadaa inuu maanta soo afjaro hannaanka lagu ciqaabo dadka ka shaqeeya ka ganacsiga jirka, kaas oo booliiska dalakas u oggolaanaya in dadkaas ay muddo labo sano ah ku hayaan xarumo dhaqan-celin ah.
Maxaabiista ayaa laguq asbaa inay shaqeeyaan, oo sida la sheegay ay sameeyaan qalabka ay carruurto ku ciyaarto iyo alaabta guryaha.
Hannaankan ayaa la soo afjarayaa maanta 29 December. Kuwa xarumahaas ku jira ayaana la sii deyn doonaa, isda ay baahisay wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua.
Ka ganacsiga jirka ayaa weli mamnuuc ka ah Shiinaha.
Qofkii lagu helo wuxuu mudanayaa 15 maalmood oo xarig ah iyo ganaax dhan 5,000 yuan (£546).
Dhallinyarada Netherlands oo dalbanaya in dambi laga dhigo jirka laga ganacsado
Muxuu la kulmay suxufigii wareysiga la yeeshay "nin ka mid ah ragga isguursada"?
Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in xarumaha dhaqan-celinta ay gacan ka geysteen dhaqanka wanaagsan ee bulshada, tan iyo intii hannaankaas la sameeyay 20 sano kahor.
Daraasad ay sanadkii 2013 sameysay hay`adda Asia Catalyst, ayaa su`aal gelisay waxtarka hannaankaas.
Warbixinta hay`adda ayaa lagu soo qaatay wareysiyo lala yeeshay 30 ahween ah oo jirkooda ka ganacsada kuna kala sugan labo magaalo.
Daraasadda waxaa lagu sheegay in dadka la xiray ay awoodi waayeen inay bartaan xirfado cusub oo ay ku shaqeystaan kaddib marka la sii daayo. Waxay sidoo kale daraasaddu xustay in maxaabiistu ay qabanayeen shaqooyin xoogsi ah.
Waxaa warbixinta daraasadda lagu yiri: "Dhammaan dadka jirkooda ka ganacsada ee aan wareysannay dib ayay ugu laabteen ka ganacsiga jirka isla markii la sii daayay kaddib."
Macluumaad sir ah oo laga helay xaaladda Muslimiinta Uighur ee u xiran dowladda Shiinaha
Arsenal maxay isaga fogeysay hadalka Ozil ee ka dhanka ah Shiinaha?
Warbixin sanadkii 2013 ay soo saartay hay`adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxaa lagu wareystay 140 qof oo isugu jira dad jirkooda ka ganacsada, macaamiil iyo booliis waxaana lagu ogaaday in dad badan oo jirkooda ganacsada ay garaaceen booliiska si ay dembigooda u qirtaan.
Mid ka mid ah dadka jirkooda ka ganacsada ayaa sheegtay in lagu khiyaanay inay saxiixdo warqad qirasho ah.
"Booliiska ayaa ii sheegay inaysan wax dhib ah lahayn, oo aan keliya warqadda ku qoro magaceyga kaddibna ay i sii deyn doonaan afar ama shan maalmood kaddib,"ayay tiri.
"Taas beddelkeed, waxaa leygu xiray xarun dhaqan-celin ah muddo lix bilood ah."
Sanadkii 2013, Shiinaha ayaa ku dhawaaqay inuu meesha ka saarayo hannaanka dadka dhaqan-celinta loogu sameynayo iyagoo lagu shaqeysanayo.
Shiinuhu ma mamnuucayo xeryaha dhaqan-celinta gebigood. Xukuumadda ayaa sheegtay in tiro xeryo ah oo ku yaalla waqooyi-galbeed gobolka Xinjiang ay yihiin kuwo ay dadku iskood wax ugu baranayaan si looga hortago xagjirnimada.
Si kastaba, ururrada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in Muslimiin badan oo qowmiyadda Uighur ka tirsan la geeyay xeryahaas laguna qasbay inay ka baxaan diintooda.